स्मार्ट ग्रीन टावर, मौसम परिवर्तन रोक्न एक गगनचुम्बी भवन | नेटवर्क मौसम विज्ञान
स्मार्ट ग्रीन टावर, मौसम परिवर्तन रोक्न एक गगनचुम्बी भवन
छवि - नि: शुल्क आर्किटेक्टेन
भविष्यका भवनहरू, सबै सम्भावनामा, तिनीहरू आजका भन्दा धेरै भिन्न हुनेछन्। यदि हामीले भर्खरै बुझ्यौं कि भारतमा तिनीहरूले पुनर्नवीनीकरण गरिएको सामग्रीसहित घरहरू निर्माण गर्न लागेका छन् भने जर्मनीमा तिनीहरूले केहि पनि गर्न थालेका छन् जुन सहरहरू पूर्णतया बदल्न सक्दछ, धेरै व्यक्तिको जीवनका साथै।
र यो यो हो कि, अहिलेसम्म भवनहरू निर्माण गरियो उनीहरूको आफ्नै स्थिरताको बारेमा सोच्दै, तर के हुन्छ यदि एक पूरै छिमेकमा नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्षम बनाइएको थियो भने? यो अचम्मको हुनेछ, सही? खैर, यो उद्देश्य हो कि वास्तुकारले प्राप्त गर्न आशा गर्दछ वोल्फग्याang फ्रे, यसको स्मार्ट ग्रीन टावर परियोजनाको साथ, जसको अर्थ स्मार्ट ग्रीन टावर हुनेछ।
भवन टेस्लाले यसको कारहरूमा प्रयोग गर्ने लिथियम-आयन ब्याट्रीबाट प्रेरित भएको थियो, यस बाहेक, सिएमेन्स र फ्रेनहोफर ISE संस्थानको सौर्य ऊर्जा प्रणालीको सहकार्य रहेको छ। तसर्थ यो एक भविष्य देख्ने धरहरा हुनेछ जसको साथ दर्जनौं मानिस सफा उर्जा पाउन सक्छन्। कहाँ? हरित उद्योग पार्क, फ्रेबर्गमा।
Tower 48 मिटर उचाईको यो टावर ,,5600०० वर्ग मिटर साइटमा निर्माण हुनेछ। एकचोटि समाप्त भएपछि यो to० घरहरू समावेश गर्दछ जुन एक देखि चार बेडरूम सम्म हुनेछ, कार्यालयहरु को अतिरिक्त।
यसको एफएडेड उच्च प्रदर्शन सौर सेल प्यानलले कभर गरिनेछ, जसमा हालको उपकरणहरूको तुलनामा २१% भन्दा बढी क्षमता छ। यी एक मिलियन किलोवाट घण्टाको बिजुलीको एक चौथाई उत्पादन। यसमा लिथियम आयन ब्याट्री पनि यसको संरचनामा एकीकृत हुनेछ।
सम्पूर्ण छिमेकको आपूर्ति गर्नका लागि, एक DC मध्यवर्ती सर्किट प्रयोग गर्दछयस तरिकाले तपाईं ऊर्जा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र लागत घटाउन सक्नुहुनेछ किनभने वितरण सन्तुलित र बुद्धिमान् हुनेछ।
तर यदि यो तपाइँको लागि पर्याप्त छैन, स्मार्ट ग्रीन टावरले १००% आत्मनिर्भर भएको बहाना गर्दछ। यसको पर्खाल भित्र त्यहाँ बढ्दो खाना र माछा जुटाउन एक्वापोनिक्समा समर्पित क्षेत्रहरू हुनेछन्। प्रयोग गरिएको पानीले ब्याट्रीहरू चिसो गर्न प्रयोग गर्दछ जुन निस्सन्देह धेरै चाखलाग्दो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » स्मार्ट ग्रीन टावर, मौसम परिवर्तन रोक्न एक गगनचुम्बी भवन
के हो र कसरी समुद्री धाराहरू गठन हुन्छन्?
भविष्यको लागि मौसम परिवर्तनको प्रभावहरू